Ividiyo: Yenza iiVidiyo zooPopayi kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 30, 2017 NgoLwesithathu, Matshi 10, 2021 Douglas Karr
Senza uphando, iskripthi kwaye sivelisa iividiyo zoopopayi kubaxumi bethu kwaye yinkqubo entsonkothileyo leyo. Ngelixa benembuyekezo entle kutyalo-mali, iinkampani ezininzi azinakukwazi ukuchitha amawaka eedola kwimifanekiso emihle. Wideo.co iphuhlise iqonga lokudala ividiyo ekwi-intanethi ukubonelela ngesisombululo esifikelelekayo phakathi.
Ungaluvavanya iqonga ngokwakho, wenze ividiyo yoopopayi simahla kunye neetemplate zabo abazibonelelayo. Iitemplate zibandakanya ishishini, umbhiyozo, idemo, i-e-commerce, imfundo, umsitho, isimemo, ocacisayo, ukonyusa ingxowa-mali, imiboniso yeemveliso, iividiyo zentengiso, imiboniso yeenkonzo, imibukiso yesilayidi, ukuqala, izibalo, okanye izifundo. Okanye ungaqala ividiyo yakho kwasekuqaleni. Wideo.co wabelana ngeengcebiso kunye namaqhinga kwibhlog yabo.
Ukuba ufuna isandla, Wideo.co ikwabonelela ngokufikelela kuBayili beMizobo enamava kunye neeZilwanyana.
Ubungqina beVidiyo yoopopayi
Wideo.co Inemveliso yevidiyo ezenzekelayo nayo, yeenkampani ezinqwenela ukuzenzekelayo kunye nokupapasha amawaka eevidiyo ngokusekwe kwitemplate enye.
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Wideo.co
tags: iividiyo zoopopayiIividiyo zedemo zoopopayioopopayi e-commerce iividiyoIividiyo ze-ecommerce zoopopayiiividiyo zemifanekiso yoopopayiIividiyo zemisitho yoopopayiIividiyo ezichazayo zoopopayiIividiyo zoopopayi zokunyusa imaliiividiyo zezimemo zoopopayiiividiyo zentethoiividiyo zemiboniso bhanyabhanyaiividiyo zentengisoiividiyo zenkonzo yoopopayiIividiyo zomboniso wesilayidiIividiyo zokuqalisa zoopopayiyevidiyo yoopopayiizibalo zoopopayi zevidiyoIvidiyo yoopopayiiividiyo zoopopayiusetyenziso lokubonisa ividiyoIividiyo zeshishiniIividiyo zokubhiyozelaIividiyo zedemoIividiyo ze-E-CommerceIividiyo zemfundoIividiyo zomnyhadalaIividiyo ezichazayoIividiyo ezinyusa imaliiividiyo zesimemoImveliso yevidiyo iividiyoIvidiyo yokwazisaUmboniso wevidiyoUmboniso wesilayidiividiyo yokuqalisaIividiyo zokuqalisaividiyo yeenkcukacha mananiizibalo zevidiyoIvidiyo yokufundisaIvidiyo